Abokuqala abaye bazama i-iPhone 12 mini banike uluvo lwabo | IPhone iindaba
Abokuqala abaye bazama i-iPhone 12 mini banike uluvo lwabo
UToni Cortés | | iPhone 12
Iiyunithi zokuqala ze-iPhone 12 mini sele ziqalisile ukufikelela kwilungelo lokuqala loonondaba abakhethekileyo becandelo, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwabanye abasebenzisi. Kwaye sele beqalisile ukuthumela umbono wabo wokuqala.
Ngaphandle kwexesha lokuphicotha kuphononongo olucokisekileyo, ngokubanzi abagxeki bokuqala be-smartphone abakwazileyo ukuvavanya i-iPhone 12 mini bavumelana ngento enye: Iselfowuni encinci, inamandla amakhulu, kodwa inezinto ezincinci zokuzimela. Masibone ukuba bathumele ntoni.
Ezinye iintatheli ezikhethekileyo sele zifumene iitheminali zazo ezivela kumtsha I-iPhone 12 encinci kunye ne-iPhone 12 Pro kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwabanye abasebenzisi abayicelileyo ngolwesiHlanu odlulileyo, kwaye ngubani oza kulinda le NgolwesiHlanu umhla we-13 ukuze abe nakho ekhaya.
Kwaye bonke abo baqalise ukupapasha kumajelo abo eendaba bayavuma ngokudumisa ubungakanani obuncinci besiphelo kunye nendlela esebenza ngayo, njengabakhuluwa bayo i-iPhone 12 kunye ne-iPhone 12 Pro. Umthamo omncinci wamandla amaninzi, kunye nokuzimela ngokufanelekileyo.
Izimvo ezintandathu ezahlukeneyo
A UChris Velazco en Engadget ubuthandile ubuncinci bayo. Ucinga ukuba incinci kancinci kune-iPhone SE uyijongile kwangoko kulo nyaka, kodwa ayibonakali ngathi incinci. Oku kungenxa yokubonisa kwe-5,4-intshi Super Retina XDR. Ithi ikhazimla njenge-iPhone 12 kwaye ine-HDR, kodwa ngenxa yokuba incinci, ine-pixel density ephezulu.
En esengozini, UDieter Bohn ubhala ukuba i-iPhone 12 mini ayisiyeyona modeli ilungileyo kubantu abaninzi, kodwa iya kuba yeyona ikhethwe ngabasebenzisi abaninzi, kuba amanqaku afana kakhulu ne-iPhone 12.
Uthi uchukumisekile ngamandla ayo kwindawo encinci kangaka. I-iPhone 12 mini ine-processor ekhawulezayo yayo nayiphi na enye i-smartphone, inenkqubo yekhamera efanayo njenge-iPhone 12, kwaye ikakhulu inazo zonke izinto kunye nee-eriyali eziyimfuneko kwi-5G ekhawulezayo e-US. Ngamafutshane, umdlalo omangalisayo wetekhnoloji.
U "kodwa" kubomi bebhetri. Ucacisa ukuba ngaphandle kokuyisebenzisa kakhulu, i-justito ifika ebusuku ngaphandle kokuyiphatha. Ke ayiyonto imbi, kodwa ngokuqinisekileyo ayikhuthazwa kakhulu, kuba kusisohlwayo ukuba ungabikho imini yonke kwaye ungazi ukuba ibhetri iyakukubamba.
UMateyu panzarino chaza kwi TechCrunch ezinye iinkcukacha zescreen esincinci se-iPhone 12. Icacisa ukuba ubukhulu buhlangulwe, oko kuthetha ukuba ibonisiwe malunga ne-96% yesisombululo sayo 'semveli' 2340 × 1080 isisombululo sesikrini, njengoko imini inesisombululo se-476ppi kwiscreen esincinci kune-iPhone 12 ene-460ppi yayo.
I-Panzarino ayiqinisekiswanga ngumlinganiso ohlukeneyo wesikrini se-iPhone 12 mini.
UJoanna Stern ukusuka Isitalato iWall Journal yathanda ubungakanani bayo obuncinci. Ithi ungayichwetheza kakuhle ubhontsi omnye, kwaye ufikelele kwii-icon kwelinye icala lesikrini sasekhaya ngaphandle kokutshintsha isandla sakho kwifowuni. Okanye ungathetha emnxebeni, uyibeke endlebeni, ngaphandle kokugquma ubuso bakho bonke.
URaymond Wong, umhleli we negalelo, Cacisa ukuba ngubani lo mbutho. ithi sinye kuphela isizathu sokuthenga i-iPhone 12 mini: ubungakanani bayo. Ngokukodwa kufanelekile kubasebenzisi abadiniweyo ziifowuni ezinkulu kwaye bafuna isixhobo esincinci kwaye esisebenza ngakumbi, kwaye esingena epokothweni yakho, nokuba sincinci kangakanani na. Ithi iifowuni ezincinci zibuyele kwifashoni
UBritta O'Boyle usuka I-Pocket-lint igxininisa ikhamera encinci ye-iPhone 12. Ucacisa ukuba isebenza kakuhle kwimeko yokukhanya okuphantsi, kwaye imo yasebusuku isebenza ngokuzenzekelayo xa ifuneka, ikuvumela ukuba uthathe ngaphezulu kwesithambiso esifanelekileyo ngaphandle kokukhanya, ukuba nje uhlala uhleli, ixesha elide. ukuzinza komfanekiso onokukufumana kwi-iPhone 12 Pro Max okanye ezinye ii-smartphones ezikhuphisanayo.
Ngamafutshane, izimvo zazo zonke izinto ezithandwa yi-iPhone 12 mini. Iimpawu ezintle kwiselfowuni encinci. Kwaye ngokucacileyo, ukuba imilinganiselo yakho incinci, ibhetri yakho nayo. Kwaye ixabiso layo, kunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 12 » Abokuqala abaye bazama i-iPhone 12 mini banike uluvo lwabo
I-Fortnite sele ikuvumela ukuba uchithe i-V-Bucks ethengiweyo kwiVenkile ye App kwamanye amaqonga
Ngoku sinokugcina iimeko ezilishumi elinambini zeNcwadi yaseMzantsi ye-iPhone 12 Mini kunye nePro Max